I-FX Chaos Second Edition Inkomba ye-MT4 - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Izinkomba ze-Forex MT4 I-FX Chaos Second Edition Inkomba ye-MT4
Isingeniso se-FX Chaos Second Edition Inkomba
1 Isingeniso se-FX Chaos Second Edition Inkomba
2 Siyini Inkomba ye-FX Chaos Second Edition?
3 Sisebenza kanjani Inkomba ye-FX Chaos Second Edition?
4 Isetshenziswa kanjani i-FX Chaos Second Edition Indicator ye-MT4
I-Oscillator Eyesabekayo (UKUZE) ingenye oscillator ethandwa kakhulu. Empeleni, kunabadayisi abaningi abathengisayo abanenzuzo abayisebenzisela ukwenza inzuzo emakethe. Noma kunjalo, ijwayele ukuhlehla ngezinye izikhathi.
I-FX Chaos Second Edition Inkomba ifana kakhulu ne-AO, kodwa ngomehluko ocashile okwenza iphendule kakhulu kumasiginali wesenzo samanani.
Siyini Inkomba ye-FX Chaos Second Edition?
Inkomba ye-FX Chaos Second Edition inkomba yomfutho enikeza izinkomba zethrendi kanye nomfutho kusetshenziswa i-oscillator.. Le nkomba ayigcini nje ngokubonisa ithrendi kanye nesiqondiso somfutho, kodwa futhi ikhombisa ukuqiniswa kanye nokuba buthakathaka komkhuba ngombala wemigoqo yawo.
Le nkomba ihlela amabha e-histogram azungeza ku-zero.
Imigoqo eluhlaza okotshani ikhombisa ukuthambekela kwe-bullish okuqinisayo noma umfutho, kuyilapho imigoqo ebomvu eqondile ikhombisa ukuthambekela kwe-bullish ebuthaka noma umfutho. Ngokuphambene, Imigoqo ebomvu engemihle ikhombisa ukuthambekela kokuthwala okuqinisayo, kuyilapho amabha aluhlaza angemahle abonisa ukuthambekela kwe-bearish eba buthaka.
Sisebenza kanjani Inkomba ye-FX Chaos Second Edition?
I-FX Chaos Second Edition Inkomba isebenzisa i-algorithm ehlanganisa umehluko phakathi kwe-Simple Moving Average esheshayo nenensayo. (Isikolo sebanga eliphezulu) umugqa. Iphinde isebenzisa i-median yebha ngayinye njengesisekelo sokubala kwayo. Umphumela bese uhlelwa njengemigoqo ye-histogram ewindini lenkomba.
Umbala wamabha uncike ekutheni ibha inenani eliphezulu noma eliphansi uma kuqhathaniswa nebha eyandulele. Ihlela amabha aluhlaza lapho inani liphezulu namabha abomvu lapho inani liphansi.
Isetshenziswa kanjani i-FX Chaos Second Edition Indicator ye-MT4
I-FX Chaos Second Edition Inkomba ayinazo izilungiselelo zenkomba lapho abasebenzisi bangalungisa khona ukuzwela kwayo. Kanjalo, izici zayo sezilungisiwe kakade. Abahwebi bangashintsha kuphela umbala nokujiya kwamabha ngaphakathi kwethebhu yemibala.
Abahwebi bangayisebenzisa ukukhomba ukuchema kwethrendi okususelwe ekutheni imigoqo ivamise ukuba yinhle noma iyimbi.
Ingasetshenziswa futhi ukukhomba amandla ethrendi kusetshenziswa umbala wamabha.
Okokugcina, ingasetshenziswa futhi njengenkomba noma njengenkomba yesignali yokuhlehla umfutho esekelwe ekugudluzweni kwemishayo yayo isuka kokubi iye kokuyinhle noma ngokuphambene..
Vula i-oda lokuthenga ekuhlanganeni kokusethwa kohwebo okubuyela emuva kwe-bullish okusekelwe emaphethini ahlehlayo namakhefu e-trendline kanye nokushintshwa kwemigoqo yoHlelo Lwesibili lwe-FX Chaos iye kokuhle.. Setha ukulahleka kokuma ekusekelweni ngezansi kwekhandlela lokungena.
Vula i-oda lokuthengisa ekuhlanganeni kwe-bearish trend reversal trade setup ngokusekelwe emaphethini ahlehlayo kanye nekhefu le-trendline kanye nokushintshwa kwemigoqo yoHlelo Lwesibili lwe-FX Chaos iye kokubi.. Setha ukulahleka kokuma ekumelaneni ngenhla kwekhandlela lokungena.
Le nkomba ifana kakhulu ne-Awesome Oscillator. Noma kunjalo, inomehluko ocashile. Isabela kakhulu ekunyakazeni kwentengo uma iqhathaniswa ne-AO iyenza ifaneleke njengesignali yokuqinisekisa ukuhlehla kwethrendi..
I-FX Chaos Second Edition Inkomba ye-MT4 iyi-Metatrader 4 (MT4) inkomba kanye nengqikithi yale nkomba yezobuchwepheshe ukuguqula idatha yomlando onqwabelene.
I-FX Chaos Second Edition Inkomba ye-MT4 inikeza ithuba lokuhlonza izici ezihlukahlukene namaphethini amandla entengo angabonakali ngeso lenyama..
Usifaka kanjani i-FX Chaos Second Edition Inkomba ye-MT4.mq4?
Landa i-FX Chaos Second Edition Inkomba ye-MT4.mq4
Kopisha Inkomba ye-FX Chaos Second Edition ye-MT4.mq4 kuhla lwemibhalo yakho ye-Metatrader / ochwepheshe / izinkomba /
Chofoza kwesokudla ku-FX Chaos Second Edition Inkomba ye-MT4.mq4
Inkomba ye-FX Chaos Second Edition Inkomba ye-MT4.mq4 iyatholakala eshadini lakho
Ungasisusa kanjani i-FX Chaos Second Edition Inkomba ye-MT4.mq4 eshadini lakho le-Metatrader?
I-FX Chaos Second Edition Inkomba ye-MT4 (U-downloader mahhala)
Isiqephu esedluleHeiken Ashi Smoothed Volatility Isinyathelo MT5 Inkomba
Isihloko esilandelayoMACD No Sample MT5 Indicator
Inkomba ye-Awesome Bar Counter ye-MT4